बुवाआमाले जग्गा बेचेर बिहे गरिदिए, ८ महिनाकी गर्भवती हुँदा दाइजाेकाे नाउँमा हत्या ! « Salleri Khabar
बुवाआमाले जग्गा बेचेर बिहे गरिदिए, ८ महिनाकी गर्भवती हुँदा दाइजाेकाे नाउँमा हत्या !
५ चैत, काठमाडाैँ । दाइजोको भुंग्रोमा परेकी २३ वर्षीया रेखादेवी ठाकुर अघिल्लो फागुनमा माइत गएकी थिइन्। बुवाआमाले जग्गा बेचेर कसिदिएको लगनगाँठोकै सम्मान खातिर रेखादेवी मन नलाग्दा–नलाग्दै ईशनाथ–५ लक्ष्मीनियास्थित घर फर्किइन्। ‘त्यसपछि बहिनी रेखादेवी फर्केर आइनन्’, उनका दाइ रोशन ठाकुरले भावविह्वल हुँदै सम्झिए, ‘आयो त केवल मृत्युको खबर।’
उनका अनुसार कोठामा फुटेका चुरा र सामान यत्रतत्र छरिएका थिए। प्रहरी तिनै चुरा टिप्दै थिए। रेखादेवीको शव ओछ्यानमा थियो। एउटा सल दुई टुक्रा पारेर छोपिएको थियो। रेखाका ससुरालाई उद्धृत गर्दै रोशनले भने, ‘यही सलमा झुन्डिएर मरेकी हो।’ तर, न झुन्डिएको अवस्थामा शव थियो न त कुनै फोटो देखाइयो। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा छ ।